Orinasa sy mpamokatra fampiharana ny vokatra avy amin'ny orinasa China | Zhenyuan
1. Hery matanjaka sy lanja maivana
Ny vy dia manana tanjaka avo kokoa sy modulus elastika. Raha ampitahaina amin'ny beton sy hazo, dia ambany dia ambany ny tahan'ny hakitroky ny famokarana tanjaka, noho izany ao anatin'ny toe-javatra mampiady saina, ny faritra vy dia misy faritra kely, lanja mavesatra maty, mora entina sy apetraka , mety amin'ny rafitra miaraka amin'ny halavany lehibe, haavo avo ary fiterahana mavesatra.
2, henjana vy, plastika tsara, fitoviana ara-materialy, azo itokisana amin'ny firafitra avo
Izy io dia mety amin'ny fiatraikany sy ny enta-mavesatra mavitrika ary manana fahombiazan'ny seismika tsara. Ny firafitra anatiny amin'ny vy dia mitovy, saika isotropic. Ny tena fiasan'ny rafitra vy dia mifanaraka amin'ny teôria fanaovana kajy. Ka ny vy dia tena azo antoka.
3, Sfamokarana rafitra teel sy fametrahana mari-pahaizana ambony
Ny mpikamban'ny vy dia mora mivondrona ao amin'ny orinasa sy eo an-toerana. Ny fananganana mekanika fananganana mekanika vita amin'ny mekanika vita vita tsara, famokarana avo lenta, hafainganam-pandehan'ny tranokala, fetran'ny fotoana fohy. Ny firafitry ny vy dia iray amin'ireo rafitr'ireo indostrialy indrindra.
4. Fahombiazana tsara amin'ny famehezana ny firafitry ny vy
Satria azo fehezina tanteraka ny firafitra nohosorana, dia azo atao anaty sambo avo be miaraka amin'ny fahateren'ny rivotra sy ny fahateren'ny rano, dobo lehibe misy solika, fantsom-pamokarana sns.
5, vy fanoherana hafanana fa tsy fanoherana afo
Rehefa eo ambanin'ny 150 temperature ny maripana dia miova kely ny fananana vy. Noho izany, ny firafitry ny vy dia mety amin'ny magazay mafana, fa rehefa iharan'ny taratra hafanana manodidina ny 150 ℃ ny tampon'ny firafitra dia tokony ampiasaina mba hiarovana azy. Ny maripana dia eo anelanelan'ny 300 ℃ sy 400 ℃. Ny tanjaka vy sy ny modulus elastika dia nihena be, ary ny herin'ny vy dia nitifitra aotra raha teo amin'ny 600 ℃ ny mari-pana. amin'ireo trano misy fepetra takiana manokana amin'ny fiarovana afo, rafitra vy dia tsy maintsy arovana amin'ny fitaovana marefo hanatsarana ny fanoherana ny afo.
6. fanoherana ny harafesin'ny vy
Indrindra amin'ny tontolo antonontonony mando sy manimba, mora harafesina. Rafitra vy ankapobeny ho harafesina, nohosorana loko na hosodoko ary fikojakojana tsy tapaka.Ho an'ny rafitra an-dranomasina any an-dranomasina, misy fepetra manokana toy ny "zinc block anodic protection" tokony horaisina hisorohana ny fahasimbana.
7. Karbaona ambany, fitsitsiana angovo, maintso ary azo ampiasaina indray
Ny fandravana ireo rafitra vy dia mamokatra saika tsy misy fako fananganana ary azo averina amboarina ny vy.
Ny vy mahery dia tokony halalinina mba hanatsarana ny tanjaky ny vokatra, ankoatr'izay, ny karazana fizarana vaovao, toy ny fizarana H (fantatra koa amin'ny hoe faritra misy flange) ary ny takelaka miendrika T sy miendrika endrika, dia tokony ahodina mba hanomezana izay ilain'ny rafitra lava sy trano avo be.
Ny vokatra avy amin'ny orinasa dia matetika ampiasaina amin'ny atrikasa indostrialy lehibe, fitehirizana mangatsiaka, tranon'ny birao, tranon'ny birao, trano fitehirizam-bokatra, trano heva lehibe, tranon'ny gara, toeram-pivarotana, efitrano fampirantiana, gymnasium, foibe fampirantiana, gara misy haingam-pandeha haingam-pandeha ary indostrialy hafa toeram-panorenana ho an'ny daholobe .......
Foibe mangatsiaka fitehirizana mangatsiaka
Any Yunnan, Sina no misy ny tetikasa
Fivarotana Auto 4S
Any Dali, faritanin'i Yunnan no misy ny tetikasa
Any Lijiang, Yunnan no misy ny tetikasa
Any amin'ny fanjakan'ny Wa any Myanmar no misy ny tetikasa
Trano biraon'ny birao
Any Tachilek, Myanmar no misy ny tetikasa
Previous: Fampisehoana ampahany amin'ny vokatra avy amin'ny orinasa
Manaraka: Class Frame vy